घरबाट कलम किन्छु भन्दै हिँडेकी १४ बर्षिया किशोरी प्रेमी भेट्न गएको खुलेपछि….. – PathivaraOnline
Home > रोचक > घरबाट कलम किन्छु भन्दै हिँडेकी १४ बर्षिया किशोरी प्रेमी भेट्न गएको खुलेपछि…..
Poonam April 20, 2021 रोचक, समाचार, समाज	0
कलम किन्न भनेर घरबाट साँझ निस्केकी एक १४ बर्षिया बालिकाले घर फर्केर सुनाएको घटनाले सबैलाई स्त ब्ध पा र्यो । परिवारका सदस्यहरुमा चिन्ता र डर एकैपटक थपियो । घ ट ना को अनुसन्धानपछि भने कथाले अर्कै मोठड लिएको छ ।
कञ्चनपुरमा ती किशोरीले आफूमाथि तीन जनाले लिएर गएको र अ नै ति क का’म ग रे को भन्दै परिवारलाई सु नाएको घ ट ना बनावटी भएको खु ले को छ । जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका– २ को मो ति बस्ती मा शु क्रबार साँझ करिब साढे ७ बजेतिर आफूमाथि यस्तो घटना भएको भन्दै उनले परिवारलाई सुनाएकी थिइन् ।
प्रहरीले भने बालिकाको दा बी झू टो रहेको पुष्टि भएको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमरबहादुर थापाले अ नुसन्धानका क्रममा कक्षा ७ मा अध्ययनरत ती बालिकाले बनावटी घ ट ना रचेको खु लाएका छन् ।
थापाकाअनुसार घरबाट कलम किन्छु भन्दै हिँडेकी उनले प्रेमी समेत रहेका आफूसँगै अध्ययन गर्ने अन्दाजी १६ वर्षीया किशोरलाई भेट्न गएको अ नुसन्धानले खुलाएको छ ।
तर धेरै ढिलो भएपछि घरपरिवार रि साउने हुन भन्ने डरले त्यस्तो घ ट ना भएको भन्दै आफू झु टो बोलेको उनले प्रहरीलाई बताएकी छन् । बालिकाले दिएको बयानका आधारमा उनका प्रेमीलाई प क्रा उ गरेर घ ट ना बा रे थप अ नुसन्धा न गरिरहेको छ ।
कञ्चनपुरमा ती किशोरीले आफूमाथि तीन जनाले लिएर गएको र अ नै ति क का’म गरेको भन्दै परिवारलाई सु नाएको घ ट ना बनावटी भएको खुलेको छ । जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका– २ को मोतिबस्तीमा शुक्रबार साँझ करिब साढे ७ बजेतिर आफूमाथि यस्तो घटना भएको भन्दै उनले परिवारलाई सुनाएकी थिइन् ।
दैव पनि कति निस्ठुरी ! बाबु चित्तामा, आमा अस्पतालमा छट्पटाउँदै, कुनोमा १० बर्षीय बालक!!
क्यानडा पठाउने भन्दै दिल्ली लगेर मिर्गौला निकाल्न तयारी थालिएपछि…